देशै झलमल बनाउने यस्तो योजना, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिमा परिमार्जन
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुमा दिँदै आएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरेको छ । सन् २०३० सम्म देशका सबै जनतालाई स्वच्छ, भरपर्दो र सर्वसुलभ रुपमा नवीकरणीय ऊर्जा पु¥याउने लक्ष्यका साथ नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७३ ल्याइएको छ । यस नीतिको कार्यान्वयनमार्फत परम्परागत र आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरतालाई कम गर्दै...
भूकम्पपीडित व्यथा : कुपन देखाए मात्रै पानी भर्न पाइने !
-प्रशन्न पोखरेल गोरखा । सदरमुकाम गोरखाको ढुङ्गेधारामा पानी थाप्न अनिवार्य रुपमा ‘कुपन’ देखाउनुपर्ने नियम बनेको छ । भूकम्पपछि धारामा पानीको स्रोत घटेको तर उपभोग गर्ने उपभोक्ताको चाप बढेपछि बराह खानेपानी उपभोक्ता समितिले डेरावाल र घरबेटीलाई एकेक थान कुपन बाँड्यो र यो नियम कार्यान्वयनमा आयो । पानी लिन धारा पुगेका उपभोक्ताले...
टेन्टबाटै चल्छ जिल्ला अस्पताल, उपचार गराउन जानेलाई उल्टो सास्ती
-आदित्य दाहाल मेलम्ची । भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला अस्पताल अहिलेसम्म टेन्टमा नै छ । भूकम्पले अस्पताल चर्किएर सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएकाले अहिलेसम्म जिल्ला अस्पताल टेन्टबाट उठ्न सकेको छैन । अस्पतालबाट दिने आकस्मिक, जनरल तथा ओपिडी सेवासुविधा सबै टेन्टबाट नै सञ्चालन भइरहेका छन् । हावाहुरी, घामको राप र...
संचालक समिति अलमलिँदा त्रिशूली ‘थ्री ए’ अलपत्र
-रमेश लम्साल काठमाण्डौ । गोरखा भूकम्पका कारण नराम्ररी समस्यामा फसेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत् आयोजनालाई पुनः कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा थप जटिलता पैदा भएको छ । कुल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहुँचमार्ग नेपाली सेनाले निर्माण गरे पनि थप काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले...
वैदेशिक रोजगारी अभिमुखीकरणको नाममा फस्टाएको लुटधन्दाको नालीबेली
-किरण भट्टराई काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदारलाई तालिमबिना नै अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र दिने गरेको भेटिएको छ । जति पटक गल्ती गरे पनि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाको दर्ता खारेज नहुने गरी बनाइएको घुमाउरो व्यवस्थाका कारण यस क्षेत्रमा अराजकता मौलाएको हो । विदेशमा कामदारले बढी समस्या झेल्नुको एउटा...
एक किलो बोकाको मासुलाई ४ हजार रुपैयाँ !
-नारायण ढुँगाना रत्ननगर (चितवन) । बोकाको एक किलो मासुको मूल्य कति पर्ला ? रु ५००, ६०० वा ८०० रुपैयाँ । ठाउँ अनुसार फरक÷फरक मूल्य पर्ला । तर चितवनमा एक किलो मासुको मूल्य झण्डै चार हजार पर्छ भन्दा तपाई आश्चर्य मान्नुहुन्छ होला । तीन हजार ७५० मा त किनबेच नै भइसक्यो । पश्चिम चितवनको जगतपुरबाट नुवाकोटका अमृत तिवारीले एउटा ८० किलोको प्योर...
भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा खानेपानी आयोजना मर्मत कार्य सुरु
काठमाण्डौ । सरकारले भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लाका खानेपानी आयोजना मर्मत तथा जीर्णोद्वार कार्य सुरु भएको छ । अति प्रभावित १४ तथा आंशिक प्रभावित १७ जिल्लामा प्रभावित क्षेत्र छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार एक हजार ५७० खानेपानी लाइन क्षतिग्रस्त भएको तथा तीन हजार ६६३ मा आंशिक क्षति पुगेको छ । पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत ती कार्य...
धन कमाउने सपना एकसातामै स्वाहा !
म्याग्दी । रोजगारीका लागि खाडीमुलुक कुवेत पुगेका म्याग्दीका एक युवकको मृत्यु भएको छ । एक हप्ताअघि मात्रै नेपालबाट कुवेत गएका मुदी गाविस–९ बगरका २२ वर्षीय केशव तिलीजा मगरको मृत्यु भएको हो । पारिवारिक स्रोतका अनुसार शनिबार राति खान खाएर सुतेका तिलीजाको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएको हो । बिहान नउठेपछि उनीसँगै कुवेत पुगेका नेपालीले...
लाङटाङ खोला पदमार्गका स्थानीय मालामाल
धुन्चे (रसुवा) । भूकम्पपछि टाट पल्टिएको पर्यटकीय क्षेत्र लाङ्टाङ खोला पदमार्गमा स्थानीय व्यवसायीले मनग्य आम्दानी लिन थालेका छन् । लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती सहयोग आयोजना, डब्लु डब्लु एफ र हरियो वन कार्यक्रमद्वारा गत वैशाख १२ गते भूकम्पले क्षति पु¥याएको स्याफ्रुबेँसी, वम्पु, रिम्चे क्षेत्रको नदी किनारको साविक पदमार्ग...
भूकम्प र नाकाबन्दीको ह्याङओभर उत्रदै, अवरुद्ध राष्ट्रिय गौरवका विद्युत आयोजनाको काम सुचारु
►रमेश लम्साल काठमाण्डौ । गोरखा भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निर्माण कार्य रोकिएका आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो सान्जेन र सान्जेनको काम तीव्ररुपमा अगाडि बढेको छ। यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो...
पुननिर्माणमा यसरी हुँदैछ घूसको बार्गेनिङ, नदिने पीडितको नाम छुटाइदिए इञ्जिनियरले
-प्रशन्न पोखरेल गोरखा । “तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आएका इन्जिनियरले मलाई कोठाभित्र बोलाए, म पूर्व वडाध्यक्ष हुँ भन्ने थाहा पाएका उनले गाउँलेसँग १४/१५ हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाएर आफूलाई दिएमात्रै अनुदान पाउनयोग्य तथ्याङ्क भरेर पठाउने प्रस्ताव राखे, मैले घुस दिँदैनौं भनेँ,'पछि देख्लास्' भन्दै इन्जिनियर उठे,” गोरखाको पालुङटार...
खडेरीले कर्णालीमा १ अर्ब ४० करोडको खाद्यबाली नष्ट, गरीब भोकै मर्ने अवस्था
जुम्ला । ८ महिनाभन्दा लामो खडेरीका कारण कर्णालीमा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको खाद्यबाली नष्ट भएको छ। खडेरीले सबैभन्दा ठूलो मारमा मुगु जिल्ला परेको छ। २४ गाविसको मुगु जिल्लाका १२ गाविस निकै सङ्कटग्रस्त र १२ गाविस सङ्कटोन्मुख अवस्थामा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मुगुका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा चन्दप्रसाद रिसालले जानकारी दिए।...
काठमाण्डौको फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने तयारी, नमूना परियोजनाबाट १४ किलोवाट बिजुली उत्पादन हुने
काठमाण्डौ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा कुहिने र नकुहिने गरी दैनिक ४५० टन फोहर उत्पादन हुने गरेको छ । दैनिक निस्कने फोहरमध्ये ६३ प्रतिशत जैविक हुने गरेको छ । महानगरपालिकासँगै जोडिएका अन्य नगरपालिकासमेतलाई जोड्ने हो भने दैनिक झन्डै ७०० टनसम्म फोहर उत्पादन हुने गरेको छ । सिसडोल ल्यान्डफिल साइडमा दैनिक ६५० टन फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको...